Haharitra hafiriana izany? - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2022-01 > Haharitra hafiriana izany?
Rehefa mandalo krizy isika Kristianina dia tsy mora ny miaritra. Vao mainka sarotra kokoa aza isika rehefa mahatsapa fa nanadino antsika Andriamanitra, satria, araka ny fahitantsika azy, dia tsy namaly ny vavaka nataontsika nandritra ny fotoana ela izy. Na rehefa hitantsika fa tena tsy mitovy amin’izay tadiavintsika Andriamanitra. Amin'ireo toe-javatra ireo dia manana fahatakarana diso ny fomba fiasan'Andriamanitra isika. Mamaky momba ny teny fikasana ao amin’ny Baiboly isika, mivavaka ary manantena fa ho tanteraka tsy ho ela ireto: «Fa eo akaikinao Aho, te-hamonjy anao, ary ankehitriny! Tsy ho avy intsony ny famonjena ahy. Izaho dia te hanome an’i Jerosalema famonjena sy fiadanana ary hasehoko ny voninahitro ao amin’ny Isiraely” (Isaia 46,13 HFA).
Ny andinin-teny ao amin’i Isaia dia iray amin’ireo fanambarana miparitaka manerana ny Baiboly izay nampanantenain’Andriamanitra hanao zavatra haingana. Ao amin’ny teny manodidina azy, dia momba ny fanomezan-toky avy amin’Andriamanitra fa haverina any Jodia ny Jiosy tany Babylona, ​​nefa koa manondro ny fiavian’i Jesosy Kristy.
Nanontany ny Jiosy, izay mbola voafandrika tany Babylona, ​​hoe rahoviana izahay no afaka mandeha. Re ny fitarainana izay niakatra tsy tapaka ho an'Andriamanitra avy amin'ny olony mety maty nandritra ny taona maro. Re koa izy amin’ny fotoan’ny ankizy migadra izay miandry ny hanombohany ny fanjakany eto an-tany. Imbetsaka Andriamanitra no nilaza fa tsy hisalasala izy satria fantany ny olana mahazo antsika.
Rehefa nikorontan-tsaina i Habakoka mpaminany noho ny tsy rariny nataon’ny olona ka nitaraina tamin’Andriamanitra noho ny tsy fisian’ny asa tamin’ny androny, dia nahazo fahitana sy fanomezan-toky izy fa hanao zavatra Andriamanitra, nefa nanampy teny toy izao Andriamanitra: “Mbola ho avy ny faminaniana. fa ho tanteraka amin'ny fotoany ny ho avy ary hivoaka amin-kalalahana ka tsy hamitaka. Na dia mitarazoka aza, andraso; dia ho avy tokoa izany ka tsy ho latsaka ao.” (Habakoka 2,3).
Amin'ny dia lavitra, ny ankizy rehetra dia mamely ny ray aman-dreniny rehefa afaka kilometatra vitsivitsy monja ary te-hahafantatra hoe hafiriana izany. Marina fa miova ny fiheverantsika ny fotoana rehefa mihalehibe isika manomboka amin’ny fahazazana ka hatramin’ny maha-olon-dehibe, ary toa araka ny maha-antitra anao no haingana kokoa, kanefa tsy azo ihodivirana fa miady mafy isika mba haka ny fomba fijerin’Andriamanitra.
« Fahiny Andriamanitra dia niteny tamin’ny razantsika tamin’ny fomba maro tamin’ny alalan’ny mpaminany. Fa ankehitriny, amin’ny andro farany, dia niteny tamintsika tamin’ny alalan’ny Zanaka Izy. Efa notendren’Andriamanitra ho lovany ny zava-drehetra amin’ny farany. Tamin’ny alalany koa no nahariany izao tontolo izao tamin’ny voalohany” (Hebreo 1,1-2 GNB).
Ao amin’ny Taratasy ho an’ny Hebreo isika dia mamaky fa ny fiavian’i Jesosy dia nanamarika ny “faran’ny andro” ary izany dia efa roa arivo taona mahery lasa izay. Tsy hitovy amin’ny hafainganan’Andriamanitra mihitsy àry ny hafainganana. Mety ho hita fa misalasala Andriamanitra.
Angamba manampy ny mametraka fotoana amin'ny fomba fijery amin'ny fijerena ny tontolo ara-batana. Raha heverintsika fa efa maherin'ny efatra arivo tapitrisa taona ny tany ary efa ho efatra ambin'ny folo arivo tapitrisa taona izao tontolo izao, dia mety haharitra elaela ny andro vitsivitsy farany.
Mazava ho azy fa misy valiny hafa ankoatra ny fieritreretana ny fotoana sy ny fifandraisana, ny fahasahiranana amin’ny asan’ny Ray: “Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo rehetra ary mahatsiaro anareo amin’ny vavakay ary mieritreritra mandrakariva ny asa ataonareo eo anatrehan’Andriamanitra Raintsika amin’ny finoana sy ny finoana. amin’ny asanareo amin’ny fitiavana sy ny faharetanareo amin’ny fanantenana an’i Jesosy Kristy Tompontsika » (1 Tes 1,2-3).
Tsy misy toy ny sahirana ka gaga amin'ny fandehan'ny andro.
by Hilary Buck